Malunga nathi - iZhangzhou Ilanga leentyatyambo lokungenisa ngaphakathi kunye nokuthumela ngaphandle ilizwe, Ltd.
Ngo-2008, Abantu abancinci ababini abasandula ukuphumelela eyunivesithi, uCassie & Jack, bangena kurhwebo lwangaphandle lwezityalo ezinamanzi ngenxa yothando lwabo lweentyatyambo. Baqhubekile nokufunda kwaye basebenza nzima, kwaye baqokelela amava axabisekileyo, emva kweminyaka emibini baqala uhambo lwabo lokurhweba.
Ngo-2010, Baqala ukusebenzisana nendawo yokugcina abantwana ekwiDolophu yaseShaxi, kwisiXeko saseZhangzhou, evelisa ikakhulu imithi yeebanyan, enje ngeFicus ginseng, imilo yeFicus S kunye nemithi yeFicus yokuma komhlaba.
Ngo-2013, Intsebenziswano kunye nenye indawo yokugcina abantwana yongezwa, ebekwe kwidolophu yaseHaiyan iTaishan, iphi eyona ndawo idumileyo yokukhulisa nokulungisa iDracaena Sanderiana (spiral or curl bamboo, bamboor layer bamboo, straight bamboo, njl).
Zilawula ngokungqongqo umgangatho kwaye zibonelela ngenkonzo enomdla kubathengi, ephumelele ukuthembela kubathengi abaninzi.
Ngo-2016,Zhangzhou Ilanga Lentyatyambo Rhweba ngaphakathi no Rhweba ngaphandle Co., Ltd.ye yabhaliswa kwaye yasekwa. Ngenxa yeengcebiso zobungcali, umgangatho obalaseleyo, ixabiso elikhuphisanayo kunye nenkonzo yolwazelelelo, iphumelela igama elihle phakathi kwabathengi.
Ngo-2020, Kwasekwa enye indawo yokugcina abantwana. I Nursery ibekwe eBaihua villeage, Jiuhu Idolophu iZhangzhou City, yeyiphi eyona ndawo idumileyo yokuhluka kwezityalo e China. Kwaye ikwimozulu elungileyo kunye nendawo efanelekileyo-iyure enye ukusuka kwizibuko laseXiamen nakwisikhululo seenqwelomoya. Indawo yokugcina abantwana igubungela ummandla weehektare ezili-16 kwaye ixhotyiswe ngenkqubo yolawulo lobushushu kunye nenkqubo yokutshiza ngokuzenzekelayo, iyanceda ukuqhubekeka nokuhlangabezana neeodolo zabathengi.
Ngoku, i-Zhangzhou Ilanga leentyatyambo zokungenisa ngaphakathi kunye ne-Export Co., Ltd. ibe yingcali kolu shishino. Ikhethekile kwimveliso kunye nokuthengiswa kwezityalo ezinamanzi kunye neentyatyambo, kubandakanya uFicus Microcarpa, Sansevieria, Cactus, Bougaivillea, Pachira Macrocrpa, cycas, njl.njl. I-Turkey kunye namazwe asempuma mpuma.
Siyakholelwa ukuba ngemizamo yethu eqhubekayo, abathengi kunye nathi baya kuba nakho ukuphumelela-njalo.
Wamkelekile ukuba usityelele kunye nendawo yethu yokugcina abantwana.